မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်းများ ငှားရန် | ShweProperty.com
ငှားရန် - ရန်ကင်းမြို့နယ် အဝေရာလမ်းတွင်…
_ ပေ(20×70) _ Master bedrooms2_ ပါကေးခင်း _ Fully Furniture _ 1F ** ဈေးနှုန်း - 10 သိန်း (ညှိနှိုင်း) ** ...
_ ပေ(20×70) _ Master bedrooms2_ ပါကေးခင်း _ Fully Furniture _ 1F ** ဈေးနှုန်း - 10 သိန်း (ညှိနှိုင်း) **
Property ID: S-1199236
ငှားရန် - တာမွေမြို့နယ် ရွှေဝါလမ်းတွင်…
_ ပေ(25×50) _ Master bedroom 1 _ Normal bedroom 1 _ Air-cons3_ ပါကေးခင်း _ 1F ** ဈေးနှုန်း - 7.5 သိန်း (ညှိနှိုင်း) ** ...
_ ပေ(25×50) _ Master bedroom 1 _ Normal bedroom 1 _ Air-cons3_ ပါကေးခင်း _ 1F ** ဈေးနှုန်း - 7.5 သိန်း (ညှိနှိုင်း) **
Property ID: S-1199234
ငှားရန် - Apartment Rent in Bahan (ID-306)
1680 sqft , hall apartment for rent in Shwe Gone Daing, Bahan Township. Apartment with attic. Suitable for office or Shop. Monthly rent price is – 40 Lakhs (Nego) Apartment Rent in Bahan (ID-306) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the…...
1680 sqft , hall apartment for rent in Shwe Gone Daing, Bahan Township. Apartment with attic. Suitable for office or Shop. Monthly rent price is – 40 Lakhs (Nego) Apartment Rent in Bahan (ID-306) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the…
Property ID: S-1199183
*Location – Minye Kyawswar Housings, Tamwe Township. *Price – 2.8 Lakhs *Property Type — Apartment(3F) *Area — 900 sqft *Rooms formation — Hall Type, Living room and Kitchen. *Other Features — Floor Type — RC, 1-Bathroom and ready to live located at Tamwe Township....
*Location – Minye Kyawswar Housings, Tamwe Township. *Price – 2.8 Lakhs *Property Type — Apartment(3F) *Area — 900 sqft *Rooms formation — Hall Type, Living room and Kitchen. *Other Features — Floor Type — RC, 1-Bathroom and ready to live located at Tamwe Township.
Property ID: S-1199076
Mobile no : 09443086254, 09443033261, 09798424739
* Living Area - 1,844 sqft *2Bedroom & 1 Maid room * Living Room & Dinning Room * Kitchen * Bathroom & Toilet *3Balcony * Double Layer Glass Window * 24 hours Internet * Generator * 24 hours Security * CCTV * Lift * Car packing ...
* Living Area - 1,844 sqft *2Bedroom & 1 Maid room * Living Room & Dinning Room * Kitchen * Bathroom & Toilet *3Balcony * Double Layer Glass Window * 24 hours Internet * Generator * 24 hours Security * CCTV * Lift * Car packing
Listed7May 2019
Property ID: S-1190829
ငှားရန် - Code-5976 လသာမြို့နယ်အတွင်းရှိ ထပ်ခိုးအပြည့်ပါ…
Property ID: S-1190410
ငှားရန် - Code-7602 ရန်ကင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ…
Listed 23 January 2019
Property ID: S-1188070
ငှားရန် - Code-7620 လှိုင်မြို့နယ်တွင် ပြင်ဆင်ပြီး…
Property ID: S-1187275
ငှားရန် - Mini apartment for rent ( Bahan Township )
Mini apartment for rent ( Bahan Township ) *Shwegonetine , Shwegone plaza *2 and half RC *1250 sqft ( upstair -25” x 50” , downstair - 25” x 45” ) *Fully Furnished *7 Masterbedrooms with toilets attached *Electricity , Water cooler machine , Washing machine *(25” x 50” ) attic veranda included…...
Mini apartment for rent ( Bahan Township ) *Shwegonetine , Shwegone plaza *2 and half RC *1250 sqft ( upstair -25” x 50” , downstair - 25” x 45” ) *Fully Furnished *7 Masterbedrooms with toilets attached *Electricity , Water cooler machine , Washing machine *(25” x 50” ) attic veranda included…
Zaw Real Estate
Advertiser : Zaw Real Estate
Shwegonetine , Shwegone plaza
Property ID: S-1178208
Mobile no : 09769301076
Office no : 095161818
ငှားရန် - ဗဟန်းမြို့နယ်/Excel Tower (3လွှာ)
Excel Tower (3)လွှာ/အကျယ်အဝန်း = (1500)sqft/ ပါဝင်ပစ္စည်း = MBR - 1, BR - 2, A/C - 4/ Furniture/ MBR - ပါကေး...
Excel Tower (3)လွှာ/အကျယ်အဝန်း = (1500)sqft/ ပါဝင်ပစ္စည်း = MBR - 1, BR - 2, A/C - 4/ Furniture/ MBR - ပါကေး
Listed 21 October 2018
GOLDEN FUTURE LAND REAL ESTATE
Advertiser : GOLDEN FUTURE LAND REAL ESTATE
Property ID: S-1179980
Mobile no : 09770780500
ငှားရန် - အမှတ်(3)၊ရတနာလမ်း၊ဘောက်ထော်သံလမ်းအနီး၊
ဂျိုးဖြုရေ,RC ခင်း,Transformer,Basement Car Parking,New Elevator,ရေ+မီး,ဘိုထိုင်...
ဂျိုးဖြုရေ,RC ခင်း,Transformer,Basement Car Parking,New Elevator,ရေ+မီး,ဘိုထိုင်
Property ID: S-1157496
ငှားရန် - စမ်းချောင်းမြို့နယ် စည်ပင်လမ်းတွင်…
Property ID: S-1199310
Property ID: S-1199309
ငှားရန် - M-0154, လေးထောင့်ကန်လမ်းတွင် အကျယ်(25x50)…
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (25x50)Sqft ရှိပြီး Hall, နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည့် တိုက်ခန်း(2F) ကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်…...
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (25x50)Sqft ရှိပြီး Hall, နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည့် တိုက်ခန်း(2F) ကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်…
Property ID: S-1194865
ငှားရန် - M-0198, ဗိုလ်ရာညွှန့်လမ်းတွင် အကျယ်(15x50)…
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (15x50)Sqft ရှိပြီး ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ အဲယားကွန်း၊ ကြွေခင်း နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည့်…...
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (15x50)Sqft ရှိပြီး ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ အဲယားကွန်း၊ ကြွေခင်း နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည့်…
Property ID: S-1195042
ငှားရန် - M-0205, တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်တွင်…
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (17x64)Sqft ရှိပြီး ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ အဲယားကွန်း၊ နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည့်…...
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (17x64)Sqft ရှိပြီး ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ အဲယားကွန်း၊ နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည့်…
Property ID: S-1195050
ငှားရန် - M-0243, ရတနာလမ်းတွင် အကျယ်(18x54) ရှိ…
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (18x54)Sqft ရှိပြီး ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ ပါကေးခင်း နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည့်…...
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (18x54)Sqft ရှိပြီး ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ ပါကေးခင်း နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည့်…
Property ID: S-1195234
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန်တိုက်ခန်းများ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ
အလုံ ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ဗဟန်း ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ဗိုလ်တထောင် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ကိုကိုးကျွန်း ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ဒဂုံ ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ဒလ ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ဒေါပုံ ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
လှိုင် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ လှိုင်သာယာ ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ လှည်းကူး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ မှော်ဘီ ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ထန်းတပင် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ အင်းစိန် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ကမာရွတ် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ကော့မှုး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ခရမ်း ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ကွမ်းခြံကုန်း ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ကျောက်တံတား ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ကျောက်တန်း ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
ကြည့်မြင်တိုင် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ လမ်းမတော် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ လသာ ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ မရမ်းကုန်း ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ မင်္ဂလာဒုံ ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ မြောက်ဥက္ကလာ ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ပန်းပဲတန်း ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ပုဇွန်တောင် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ စမ်းချောင်း ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ဆိပ်ကြီးခနောင်တို ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ဆိပ်ကမ်း ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
ရွှေပြည်သာ ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ တောင်ဥက္ကလာ ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ တိုက်ကြီး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ တာမွေ ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ သာကေတ ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ သံလျင် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ သင်္ဃန်းကျွန်း ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ သုံးခွ ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ တွံတေး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ရန်ကင်း ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ရွှေပေါက်ကံ ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ